သတ္တုရေချိုးရေပိုက် သုံးခု ဝယ်ယူမှု - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
သတ္တုရေချိုးရေပိုက်ကို ဝယ်ယူသည့် အချက်သုံးချက်
သတ္တုရေချိုးပိုက်များလက်ရှိ ရေပန်းအစားဆုံး ရေချိုးပိုက် အမျိုးအစားတွေပါ။ ဒီထုတ်ကုန်ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူ ရာနဲ့ချီရှိပြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေ ပိုများပါတယ်။ နိုင်ငံခြား အမှတ်တံဆိပ်များအပြင် စားသုံးသူ အများအပြားသည် ဝယ်ယူသည့်အခါ ခေါင်းကိုက်ကြသည်။ ငါဘယ်လိုရွေးရမှန်းမသိဘူး။ ယနေ့တွင် တည်းဖြတ်သူသည် ဤထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် လူတိုင်းအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် မျှော်လင့်၍ ဝယ်ယူရန် အဓိကအချက်သုံးချက်ကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြခဲ့သည်။
1. သတ္တုရေချိုးပိုက်faucet နှင့် ရေချိုးခန်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသော ကြိုးဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ၎င်းသည် 304 stainless steel ကို အပြင်ပိုက်အဖြစ်၊ EPDM ကို အတွင်းပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုကာ အပူချိန်မြင့်သော နိုင်လွန်အူတိုင်ကို အသုံးပြုသည်။ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ အခွံမာသီးများကို ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး gasket များကို ယေဘူယျအားဖြင့် ding Nitrile ရော်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် သတ္တုရေချိုးပိုက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းသည် ကောင်းမွန်မှုရှိမရှိ ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။
2. ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သင်သည်သတ္တု၏လက်ရာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ရေချိုးပိုက်ကောင်းပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုရေချိုးပိုက်တွင် သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများ ကင်းစင်သော တောက်ပသော မျက်နှာပြင်ရှိသည်။ လက်ထဲတွင် အလေးချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသည်။ ကောက်ရင် အရမ်းသန်တယ်။ ၊ ၎င်းသည် ပလပ်စတစ်၏ အပြင်ဘက်တွင် Lin Yichen သတ္တုဖြင့်သာ ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီး တကယ့်သတ္တုရေချိုးခန်းပိုက်မဟုတ်ပေ။ ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ ကွဲပြားမှုကို သတိပြုပါ။
3. ထို့နောက် ရေချိုးပိုက်ကို မည်ကဲ့သို့ ဆန့်သည်ကို ကြည့်ရန် သတ္တုရေချိုးခန်းပိုက်ကို ဆန့်ပါ။ ဆန့်ပြီး ချက်ချင်း မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်ယူနိုင်လျှင် သတ္တုရေချိုးပိုက်၏ အရည်အသွေးသည် အတော်လေး ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ပြီးနောက်၊ သတ္တုရေချိုးပိုက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ရေချိုးပိုက်ကို အကြိမ်များစွာ ဆန့်ပြီးနောက် ချက်ချင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည့် အဆက်မပြတ် ဆန့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သတ္တုရေချိုးခန်းပိုက်သည် စားသုံးရန်အတော်လေးလွယ်ကူသော သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အိမ်တွင် နှစ်စဉ် ရေချိုးပိုက်အသစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု အစားထိုးသည်ဟု လူအများက ဆိုကြသည်။ တကယ်တော့၊ ဝယ်ယူမှု၏အဓိကအချက်များကိုကျွမ်းကျင်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သတ္တုရေချိုးခန်းသုံးပိုက်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ဝယ်ယူမှုအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပို၍ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။
လွန်ခဲ့သော:Stainless Steel Shower Hose ရဲ့ သံချေးတက်ခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
နောက်တစ်ခု:ရေချိုးဖို့အတွက် အသုံးများတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေက ဘာတွေလဲ။